727000 ~ 727000 Kyats
-GROHE StarLight ® chrome finish - durable, high gloss and resistant -GROHE SilkMove ceramic cartridge - lasting ease -S ports with modern attractive rosettes -Operating lever made of metal, including fitting automat.. Bath / shower diverter -Incl. Wall shower holder and hand shower in matching design
လှပပီးဒီဇိုင်းဆန်သော ရေချိုးကန် (Bath Tubs)
Shine Trading ကုမ္ပဏီမှ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းဖြစ်သည့် တစ်ဦးတည်းသုံး ရေချိုးကန်(bath tubs) ကိုလူကြီးမင်းတို့ အတွက် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်းရေချိုးကန်များသည် လူကြီးမင်းတို့ တစ်နေ့ တာပင်ပန်းနေသည်များကို ရေချိုးကန်ထဲတွင် ရေစိမ်ချိုးခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေနိုင်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏အိမ်ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ရေချိုးကန် (bath tubs) တွင် ခေါင်းမှီနိုင်ရန်အတွက်ခေါင်းအုံးအသေးစားတစ်ခု ပါဝင်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်ရေစိမ်ချိုးရာတွင် ခေါင်းအမှီပြုပြီးချိုးနိုင်သောကြောင့် သက်သောင့် သက်သာရှိစွာ ချိုးနိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်၎င်း ရေချိုးကန် (bath tubs) များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Shine Trading ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင် ပါသည်။
ကျွန်းသစ်များဖြင့် ပြုလုပ် ဒီဇိုင်းအလှဆင်ထားသော မီးဖိုချောင် ( Kitchen Room )
Sweet Home Class Furniture ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အဆောက်အဦး၊ ဟိုတယ် များတွင် ရှိ သော မီးဖိုချောင် အခန်းများကို လှပသေသပ် သန့် ရှင်းသော မီးဖိုချောင် အခန်းများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ လာစေရန် အတွက် အိမ်အတွင်းပိုင်း မီးဖိုချောင် အခန်းများ ကိုလူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက် ပြုပြင် အလှဆင်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် Sweet Home Class Furniture ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏အိမ်မီး ဖိုချောင်ခန်းများ ကို အလှဆင်နိုင်ရန်အ တွက် လိုအပ်သော ပရိဘောဂပစ္စည်းများကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် မီးဖိုချောင် များကို လှပ ဆန်းသစ် ဒီဇိုင်းဆန်သော မီးဖိုချောင်များ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ အလှ ဆင်လိုပါက Sweet Home Class Furniture ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Milano:Single Lever Exposed Bath and Shower Mixer
New Zeland နိုင်ငံထုတ် Englefield Faucet ပါ။ ပုံမြင်တာနဲ့ လှပသစ်လွင်တဲ့ ဒီဇိုင်းဆိုတာ အသေချာပါပဲ။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဆားမပေါက်၊ အစက်ပြောက်မထင်ပါဘူး။ ရေပူ၊ ရေအေး နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Mixer Faucet ပါ။
ကားကြီးများအတွက် အကောင်းစား ရေခဲသေတ္တာ ဆူညံခြင်း မရှိတဲ့ 8.5 L အကောင်းစား ရေခဲသေတ္တာကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Cigarette Lighter ဖြင့် ကားမှာ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ BMW၊ Bego၊ Toyota Land Cruiser Cygnus Mitsubishi Pajero နဲ. တခြား အိမ်စီး ကားကြီးများအတွက် အထူး သင့်တော်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း - ၇၉၀၀၀ ကျပ် Delivery free in Yangon တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက ဖုန်းလေး ဆက်ပေးပါ။ 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Female) Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
169000 ~ 169000 Kyats
-For overhead shower applications only -Spray pattern: Rain -SpeedClean® anti-lime system: Removes limescale withasimple wipe ofafinger to maintaina&quot;like-new&quot; performance
Stainless Steel Grade 304 နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ VRH အမှတ်တံဆိပ် Hand Shower ဖြစ်ပါတယ်။ ဆားပေါက်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း လုံးဝမရှိတဲ့အပြင် ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသတွေအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ ပစ္စည်းပါ။ Warranty ကလည်း ၅ နှစ်တောင်ပေးထားတာဆိုတော့ အရည်အသွေးအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ Stainless Steel အမှိန်ဖြစ်ပြီး လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
VRH အမှတ်တံဆိပ် Conceal Diverter ပါ။ Stainless Steel Grade 304 နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမို့ ဆားပေါက်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ အစက်ပြောက်ထင်ခြင်း လုံးဝမရှိပါဘူး။ Warranty လည်း ၅ နှစ်ပေးထားပါတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများအသီးသီးတွင် နည်းပညာများတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု့ များသည်လည်း တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ တိုးတက်လာသောကြောင့် ဂျာမနီbrandဖြစ်သောtekaကုမ္ပဏီသည်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ကိုလည်းစံချိန်မှီ အရည်အသွေးမြှင့်တင်လာခဲ့ ပါသည်။ဒါကြောင့်tekaအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သုံးမီးဖိုအသစ်တစ်မျိုးကိုလည်း ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်Tekaကုမ္ပဏီသည် စံချိန်မှီအရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် သုံးစွဲရလွယ်ပီး သေသပ်လှပသော ဒီဇိုင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ခိုင်ခံသပ်ရပ်လှပသော teka brandဂက်စ်မီးဖိုကိုသုံးစွဲသင့်ပါသည်။
VRH ကုမ္ပဏီကနေပဲ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ HOY အမှတ်တံဆိပ် Kitchen Wireware ပါ။ Kitchen မှာ Corner အနေနဲ့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး အလွန်လှပသပ်ရပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ Stainless steel နဲ့ လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ဆားပေါက်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း မဖြစ်ပါဘူး။ Warranty လည်းပေးထားတဲ့အပြင် ဈေးနှုန်းလည်းသက်သာပါတယ်။
Empire Holdingကုမ္ပဏီမှတင်သွင်းသောTekaအမှတ်တံဆိပ် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် အီလက်ထရောနစ်ချက်ပြုတ်functionများဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ မိသားစုများအတွက် လူကြီးမင်းတို့ အကြိုက်ဆုံးအစားစာကို ချက်ပြုတ်ရန်လုံလောက်သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မီးဖိုစွမ်းရည်ပါရှိပါတယ်။Tekaအမှတ်တံဆိပ်အီလက်ထရောနစ်ချက်ပြုတ်ရေးကိရိယာသည်လူကြီးမင်းတို့ ချက်ပြုတ်ဖို့ အချိန်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်လာစေပြီးမီးအရှိန်ကိုလည်းလွယ်ကူစွာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှု့ နှင့်မီးလျံတို့ အားအလွယ်တကူငြိ်မ်သက်နိုင်ရန် cutoffsystemကိုလည်းတပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။ဒ့ါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ အစားစားများကိုလျင်မြန်စွာချက်ပြုတ်နိုင်ပြီး ဘေးကင်းစွာချက်ပြုတ်န်ိုင်ရန်cut-off-system ပါဝင်သော tekaတံဆိပ်အီလက်ထရောနှစ်မီးဖိုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လှပပီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောအပန်းဖြေရေချိုးကန် (Bath tubs)
asm ကုမ္ပဏီမှ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ရေချိုးကန်(Bath tubs) ကိုလူကြီးမင်း တို့ အတွက်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်းရေချိုးကန်ရေစည်ပိုင်း(bath tubs) သည် လူကြီးမင်းတို့ တစ်ဦးတည်းသက်သောင့်သက်သာ စွာရေချိုးရင်း အပန်းဖြေနိုင်သော ရေချိုး ကန်ဖြစ်ပါသည်။ဒီဇိုင်းဆန်ပီးလူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်သက်သောင့်သက်သာဖြင့် အပန်းဖြေ ရေချိုးနိုင်သော (Bath tubs)ဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်ရေချိုး ကန်သုံးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းမှီသော ရေချိုးကန် (Bath tubs) ကိုလူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်တပ်ဆင် ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက asm ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
လှပပီးဒီဇိုင်းဆန်သော အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့် ဘေစင် (Tap &amp; Basin)
asm ကုမ္ပဏီမှ ရေချိုးခန်းသုံး သန့်စင်ခန်းသုံး ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ဘေစင် (tap &amp; basin) ကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အိမ် ၊ ရုံး၊ ဟိုတည်များတွင်ရှိသော သန့် စင်ခန်းများနှင့်ရေချိုးခန်းများတွင် သန့် ရှင်းသပ်ရပ်လှပသော ဘေစင် (tap &amp; basin) ကိုလူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာသုံး ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ဘေစင်(tap &amp; basin)ကိုလူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက asm ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။